Miara-mandeha lavitra: Manao dingana hiatrehana ny COVID-19 any amin’ny tany niaviany eo diaspora avy ao Afrika Atsinanana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Jona 2020 6:29 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Italiano, Español, Français, English
Hanif Gilani avy amin'ny ONG Towa Kitu Kidogo mizara ireo fanomezana ao Kenya. Sary natolotr'i Hanif Gilian.
Satria loza mitatao amin'ny ain'olona an-tapitrisa erantany ny COVID-19, tsy afa-bela amin'io raho-mitatao io ny vondrompiarahamonina avy ao Afrika Atsinanana. Mihoatra ny 7.000 ireo tranga hita tao amin'ny faritra hatramin'ny 14 Jona teo.
Rehefa nanomboka nisonga ireo trangana COVID-19 tao Tanzania firenena niaviako, lasa feno ahiahy aho momba ireo fianakaviako, izay manana olana ara-pahasalamana goavana ny maro amin-dry zareo ka hahatonga azy ho marefo manoloana ilay viriosy.
Tao anatin'ny enina taona nianarako taty Etazonia, indray mandeha isantaona ihany aho no mba afaka nisidina nankany an-tanindrazana hijery ireo ray sy reniko ary ny raibeko, izay mbola monina ao Mwanza, Tanzania. Mba hanampiana hiantohana ny fahasalaman'izy ireo tsy hisy tomika, sy hahazoany torohay momba ilay viriosy, nanangona vondron'olona iray aho mba handika ireo torohay tena ilaina mikasika ilay viriosy, ho amin'ny fiteny Kiswahili, fitenin'ny maro ao Tanzania.
Navoaka manao andiany ireo torohay, toy ny afisy kely fampahafantarana, mba ho ampahany amin'ny tetikasa COVID-19 Health Literacy, ary dia hita sy neken'ireo mpampahalala vaovao Tanzaniàna ny ezaka nataonay, toy ny VijanaFM, izay namoaka tao amin'ny tranonkalan-dry zareo ilay afisy fampahafantarana.
Ny mpanoratra, Azan Virji, miaraka amin'ireo mpianatra ao amin'ny lisea ao Tanzania (Ankavia), ary (Ankavanana) androany tao Cambridge, Massachusetts, mpianatra amin'ny taona faharoa ao amin'ny anjerimanontolo Harvard Medical School izy eo. Sary natolotr'i Azan Virji.
Saingy mbola tsapako ihany hoe tsy dia nahakitika olona betsaka aho, indrindra fa ireo izay monina any amin'ny faritra ambanivohitra ary ireo tsy manam-pahafahana firy hiditra amin'izany sy tsy dia mahay mamaky teny sy manoratra. Araka izany, teo am-pahitàna ny United Nations Global Talent Call to Creatives, (antso avo erantany nataon'ny Firenena Mikambana ho an'ireo manana talenta amin'ny famoronana), tapaka ny hevitro hanao dingana hiala amin'ny toeram-piadanana nisy ahy ka hanangana tarika iray hamorona hira ho fanairana misimisy kokoa momba ny COVID-19.
Ampahany goavana amin'ny kolontsaina ao Afrika Atsinanana ny mozika, ary efa hatry ny ela no nampiasaina tamin'ny fampahafantarana sy fandrisihana ny firaisankinan'ny vondrompiarahamonina tany amin'ireo faritra ambanivohitra. Ny onjampeo koa dia mbola mitoetra ho ny fampahalalambaovao malaza any amin'ireo firenena ao Afrika Atsinanana, ary ninoako fa mety hahasarika mpihaino maro manerana an'i Tanzania ny hira iray momba ny COVID-19.
Amin'izay fomba izay, taorian'ny nanoratana tamin'ny fomba malaky be ireo tononkira sy ny fandraketana ny feo natao nandritry ny alina, voaforon'ireo Tanzaniàna miparitaka manerana izao tontolo izao ny “Corona Tutaishinda” (“Ho resintsika ny Corona”).
Tamin'ity fandraisana andraikitra ity, naka ireo Tanzaniàna namana sasany aho izay monina any amina firenena hafa, toa ahy, nanapaka hevitra ny hanohy fianarana ambony any ivelany. Voalohany indrindra dia namana iray tany Dubai no nifandraisako. Zava-mahaliana azy ny famoronana mozika ary nangatahako izy mba hamorona mozika fohy misy andininy roa sy fiaraha-miredona iray. Avy eo, Tanzaniàna roa monina ao Boston ary nangatahako ry zareo ho tonga miaraka amina tononkira maherihery. Naka Tanzaniàna artista namana iray monina ao Kanadà aho mba hamorona ny fonon'ilay rakikira.
Fonon'ilay rakikira “Corona tutashinda” nataon'ilay Tanzaniàna artista, Shamya Jaffer.
Ny fandraketana azy no tena fanamby sarotra indrindra. Ny hany traikefako amin'ny lafiny hira dia ny teatira tany amin'ny lisea ary tao amin'ny Antoko Mpihira Yale Rosiàna tany amin'ny kolejy. Tsy mbola nanao rap izany mihitsy aho tany aloha, na hoe nandrakitra hira nohiraiko manokana. Noho izany dia niantso manampahaizana manokana aho— mpiray kilasy tamiko fahiny izay manana ny podcast azy manokana. Taorian'ny fampianarana fohy momba ny fampiasàna ny Garageband sy ‘mikrô’ ho an'ireo matianina, vitako ilay izy. Mba hamokarana ity hira ity ho an'ny vahoakako, tsy nahasakana ny hafanampoko na dia ilay solosaina efa antitra be tsy mitsahatra ny mitokona eny afovoan'ny fandraketana eny aza..
Tsy hoe fotsiny manabe momba ny COVDI-19 an'ireo mihaino azy ny “Corona Tutaishinda” , fa koa manome hafatra iray mitondra fanantenana sy firaisankina. Nalefa tamin'ny onjampeo ilay izy, tao amin'ny MegaFM ao Arusha nandritra ny volana roa teo ho eo izao, ary koa azo trohana eto. Izay rehetra azo avy amin'ny fivarotana azy ety anaty aterineto dia alefa mankany amin'ny famatsiambola hividianana ireo fitaovana fiarovantena manokana (EPI) ho an'ireo Tanzaniàna mpiasan'ny fahasalamàna any am-bava ady.
Fanomezana fitaovana fiarovantena manokana ho an'ireo Tanzaniàna mpiasan'ny fahasalamàna any am-bava ady
Toeram-ponenana ho anà Tanzaniàna an'aliny maro i Etazonia, izy ireo izay nifandra monina avy any an-tanindrazany ary ankehitriny miantso an'i Etazonia ho tanindrazany. Vondrona iray ahitàna ireo Tanzaniàna any am-pielezana, isan'izany aho, no nifanatona mba hanangona vatsy hividianana ireo EPI ho an'ireo mpiasan'ny fahasalamàna any am-bava ady ao Tanzania.
Tanjona voalohany napetrakay ny 25.000 dolara, izay mora foana dia vitanay ny nisongona azy tany am-piandohan'ity volana ity, efa tafakatra 30.000 dolara.
Drafitra amin'izao fotoana izao ny hividy EPI any Tanzania, ho fanohanana ny toekarena anatiny. Ho fitsinjaràna ireo fitaovana, laminasanay ny hanainga ireo mpitsabo isam-paritra ao amin'ny faritr'i Dar es Salaam sy Pwani, izay manana fahalalàna anatiny momba ireo hôpitaly any amin'ny faritra tsirairay misy azy avy ka mila ireny EPI ireny. Ny fanaporofoana sy fiantohana andraikitra no laharampahamehana tsy maintsy ilaina, noho izany, naka manampahaizana manokana teny an-toerana ilay vondrona mba hanamafy fa tsinjaraina tokoa amin'ireo tena mila azy ireo EPI.
Maneho ny fifamatorana ara-pihetsehampo anananay amin'i Tanzania ny teny fanevanay, umoja wetu, ndio nguvu yetu—“ny fitambarantsika no herintsika”. Na dia vaosaraky ny elanelan-tany amin'ny tanindrazanay aza izahay, matanjaka kosa ny firotsahanay hanampy an'i Tanzania hanohitra ny COVID-19.
Manampy hiatrehana ny tsy fanjarian-tsakafo ao Kenya
Araka ny lazain'ny Banky Iraisampirenena, tombanana ho 60 tapitrisa eo ireo olona ho atosiky ny COVID-19 ho anaty fahantràna lalina. Io, miampy ny fifindramonina faobe any amin'ny faritra, no toa vao mainka hanosika ireo olona efa mahantra rahateo ho tratry ny tsy fanjarian-tsakafo.
Hanif Gilani, teratany Keniàna izay mpiofana ho mpitsabo ao amin'ny Griffin Hospital ao Connecticut, dia tsy nivonona ny hiandry tsy fahampian-tsakafo henjana hamely ny fireneny.
Nifanome tànana tamin'i Ashiana Jivraj, Keniàna iray mpiara-mianatra aminy ao amin'ny Harvard School of Dental Medicine, i Gilani mba hanomboka fikambanana iray tsy mikatsaka tombontsoa ara-bola antsoina hoe Towa Kitu Kidogo, na Manomeza Kely. Fomba fiteny mahazatra fampiasa ao Kenya izy io rehefa hangataka tsolotra, saingy i Gilani sy i Jivraj kosa nanapaka hevitra ny hampiasa azy hanaporofoana fa fanomezana kely monja avy amin'ny malàla-tànana dia afaka hisy fiantraika goavana rehefa atolotra ho an'ireo izay mila fatratra azy ireny. Ho fanaporofoana ny fandraisana andraikitra, dia omen'izy ireo amin'ny antsipirihany ireo fanomezana sy ny fandaniana, ety anaty aterineto, ao anaty taratasy iray afaka hitan'ny daholobe.
Hatreto, nahangona 15.000 dolara ilay fikambanana ary nandany maherin'ny 10.000 dolara tamin'ireo hetsika toy ny fanomezana sakafo ireo olona 150 namaly voalohany tao amin'ny “Jaramogi Oginga Odinga Teaching & Referral Hospital” ao Kisumu, Kenya.
Vao haingana kely, nifanome tànana tamin'ny vondrompiarahamonina Sikh ao Kisumu ilay ONG mba hanome sakafo ireo olona maherin'ny 2.000 nahiboka tany an-tranony noho ny fihibohana, ary tamin'ny tranga sasany dia tany amin'ireo vondrompiarahamonina tratry ny tondradrano. Indraindray ny fizaràna sakafo tamin'ny tragana sasany dia notanterahana tamin'ny fandehanana an-tongotra miampita rano efa ho 1 metatra latsaka kely mankany amin'ireo vohitra nitoka-monina vokatry ny tondradrano.
Ny fitrandrahana ireo tambajotran'ny mpinamana, fianakaviana, fikambanana eny an-toerana, ary ireo mpifanolo-tànana eny an-toerana no nanampy ny Towa Kitu Kidogo hamantatra ireo vondrona isankarazany misy ireo olona miatrika hanoanana sy namaly ny filàn'izy ireny.
Araka ny lazain'ny ohabolana afrikàna iray: “Raha te-handeha haingana ianao, mandehana irery; raha te-ho lasa lavitra, miaraha amin'ny maro.”